Vashanyi vekuUK vakapihwa mutongo wakamiswa nekuda kwekunyepedzera kwekubata chibharo chehotera yeCyprus
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Vashanyi vekuUK vakapihwa mutongo wakamiswa nekuda kwekunyepedzera kwekubata chibharo chehotera yeCyprus
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Cyprus Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mumwe mushanyi ane makore 19 ekuUK, uyo akataura nhema kuti akabatwa chibharo neboka revashanyi gumi nevaviri veIsrael muhotera yeCyprus, akapihwa mutongo wemwedzi mina wakamiswa mutirongo nedare remuno.
Mutongo uyu, weizvo zvakanzi nedare remunharaunda 'huipi hwevanhu', wakamiswa kwemakore matatu, uye mukadzi wechidiki wekuBritain akanzi abhadhare € 148 mumitero yemutemo.
Akapihwa "wechipiri mukana" sekureva kwemutongi Michalis Papathanasiou, uyo akaverenga mutongo. Akatungamira kutongwa kwemwedzi mitatu apo mukadzi mudiki akapomedzerwa huipi hwevanhu mushure mekuramba zvaakataura zvekuti akabatwa chibharo nevane gumi nevaviri vekuzororo vemuIsrael muna Chikunguru apfuura.
Mhosva yake yakanzwika zvakanyanya mupepanhau reBritain pazvakabuda kuti anga achimanikidzwa nevanoongorora nezveCypriot kusaina gwaro rekudzora - chinhu chakaramba mapurisa.
ILondon yakaunganidza kumanikidza kukuru kuzviremera zveCyprus, ne Kunze kwenyika Secretary Dominic Raab achida kuti "vazvigadzire" uye varege kupa mukadzi mutongo unorema.